MACLUUMAADKA TARANKA BUG DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Bug Dog iyo Sawirro
Pug / Boston Terrier Miyood Nooc Isku Daran ah
Murphy the Bugg (1/2 Boston Terrier 1/2 Pug) eey yar oo jira 6 bilood
Buggu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Baabuur iyo Boston Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Buggs
Diiwaangeliyuhu Nooca Diiwaanka = Buggs
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Xannaanka Naadiga = Buggs
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Bug
Samee isku darka Boston Terrier / Pug ee 10 bilood jira kuna fadhiiso kursiga rakaabka ee Jeep-ka 'Isagu waa yar-yaraheenna cudugga weyn ee cudugga ah. Wuxuu jecel yahay inuu ku seexdo, u aado raacida gawaarida, ka boodida darbiyada inta uu ciyaarayo. Isagu waa mid cayaar badan oo jaceyl ah marna ma ahan daqiiqad caajis ah isaga. Joogto u hesho alaabta. Qaar ka mid ah dhaqankiisa xun ayaa ah calalinta iyo leefleefashada wax walba. ”
'Kani waa Lucie-keena cajiibka ah,' Bugg 'oo jira 3 sano. Kani waa sawir aan ku qaaday beer ku taal Laval, Canada. Waxaan isla markiiba ku dhacnay jacaylkan 20-rodol ee orodyahan 2 sano iyo badh ka hor. Kaliya waxaan idhi isboorti maxaa yeelay eeygan wuxuu kori karaa 4 fuudh oo dherer ah. Waxaan sidoo kale baraa inay ciyaarto ciyaarta dhimatay, shanta sare, qoob-ka-ciyaarka iyo hadlida. Ey aad u caqli badan, hubaal. Way kufiican tahay carruurta, xitaa haddii aan si qallafsan ula ciyaaro, waxay gebi ahaanba beddelaysaa qaab ciyaareedkeeda markay carruurtu agjoogaan. ”
'Butch waa isugeyn Boston Terrier / Pug ah oo lagu muujiyay halkan isagoo jira 7 sano. Bixiyeyaal badan ayaa ugu yeera Butch's breed a Bugg or Buggs, in kasta oo soosaaraha Butch uu ugu yeeray Pugin. Butch wuxuu xayawaan adeeg u ahaa ku dhowaad 4 sano aadna wuu ugu fiican yahay. Butch ma sameeyo waxyaabo xunxun. Inta badan isagu waa malaa'ig yar oo dhammaystiran, laakiin aabbe wuxuu hubiyaa inuusan illoobin! Butch wuxuu kudarsaday jacayl aad u badan oo kaliya nolosheena, laakiin nolosha qoyskeena oo dhan. Wax badan kama weydiisan karno Butch, isagu waa kubad yar oo jacayl iyo nabad ah. '
Nicky the Bugg (Boston Terrier / Pug hybrid) oo jira 1 ½ sano ayaa hooyadeed ka badan (Boston Terrier) ka badan aabbeheed (pug). 'Ma garanayso inay eey tahay. Iyadu waa gabadha ugu wanaagsan saaxiibadeed. '
Harley the Bugg (Boston Terrier / Pug mix) eey
Dolly the Bugg oo jira 6 bilood
Magaceedu waa Lola. Iyadu waa gabar show ah :). Iyadu waa haweeney awood leh laakiin had iyo jeer waxay gacan u haysaa dadka iyo carruurta. Ilaalin yar oo weyn. Waxay tahay 20 rodol markay tahay 2 sano jir. '
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Baabuurta
Sawirada Baaskiilka 1
Sawirada Baaskiilka 2
Sawirada Baaskiilka 3
Liiska eeyaha Territor Mix Boston eeyaha
isku darka shaybaarka adhijirrada australia madow
schnauzer iyo SUNTZU shih isku darka
5 bilood jir cagajugle american ah
iskudhafka shaybaarka iskudhafka rhodesian ridgeback
eeyo suuf ah oo iib ah